ဒေါက်တာဖြိုးသီဟ – The Voice Journal
စိတ်ခံစားချက်ဆိုတာမှာ နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။ တစ်ပိုင်းက ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်၊ နောက်တစ်ပိုင်းက သူတစ်ပါးရဲ့ စိတ်ခံစားချက်။ အဲဒါတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာ အရင်ဆုံးဘာဖြစ်နေလဲ သိဖို့လိုတယ်။ ပြီးမှ ထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ အဆင့်ဖြစ်လာတာ။ ဒီတော့ လေးမျိုး ထွက်လာတယ်။ ကိုယ့်ခံစားချက် ကိုယ်သိခြင်း (Self-Awareness)၊...
အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုများကို ရပ်တန့်ပစ်ကြပါစို့
အရင်ဆုံးအနေနဲ့ ကျားမအခြေပြု အကြမ်းဖက်မှု (Gender Based Violence) ဆိုတာကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပါရစေ။ ကျားမကွဲပြားမှုပေါ် အခြေခံပြီး လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဆန္ဒနဲ့ ဆန့်ကျင်ကာ ထိခိုက်နစ်နာအောင် ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ အပြုအမူတွေကို ကျားမအခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုလို့ ခေါ်ပါတယ်။ (Gender...
ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၁၂ ရက်နေ့က Parenting 4.0 ဆိုတဲ့ ပွဲလေး လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လာမယ့်ခေတ်သစ်အတွက် လူငယ်တွေ အသင့်ဖြစ်နေအောင် ဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲဆိုတာကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ပွဲ ဖြစ်တာမို့ ဒီအတိုင်း ဟောပြောတာအပြင် လူငယ်တွေရော...
မတ်လ ၈ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့ (International Women’s Day) ရဲ့ ဒီနှစ် ၂၀၁၉ အတွက် ဆောင်ပုဒ်ကတော့ ‘လူမှုဘ၀ ပိုကောင်းဖို့ ဟန်ချက်ညီညီ လုပ်ဆောင်စို့’ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ Balance...
ပြီးခဲ့တဲ့လက မော်လမြိုင်နည်းပညာတက္ကသိုလ်က ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေ စီစဉ်ကျင်းပတဲ့ Fair & Career Development 2019 ပွဲမှာ ပါဝင်ဟောပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဓိကကတော့ လာမယ့်နှစ်တွေအတွက် လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲဆိုတာကို ဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွဖို့ ပြောတာက...
မိခင်ဘ၀ကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျကျ ဖြတ်သန်းပါ
ခေါင်းစဉ်ဖတ်လိုက်ရင်တော့ ထူးဆန်းသွားမယ်။ မိခင်ဘ၀နဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဘာဆိုင်လဲပေါ့၊ မိခင်အလုပ်ဆိုတာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်မှ မဟုတ်တာပဲကို။ ရှင်းပြပါမယ်။ ကျွန်တော်က အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ဖို့ကို အမြဲပြောလေ့ရှိသူပါ။ ဘာလို့ဆိုတော့ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်မှ ဝင်ငွေ ရှိမယ်၊ ယောက်ျားအပေါ် လုံးလုံးလျားလျား မှီခိုနေစရာမလိုတော့ဘူး။ ...
ဒီတလော လူပြောများနေတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ် ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ လူမှုကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ တွစ်တာ (Twitter) ရဲ့ CEO ဂျက်ခ်ဒေါ်ဆီ (Jack Dorsey) နဲ့ ပတ်သက်တာပါ။ တော်တော်များများလည်း သိပြီးပြီထင်ပါတယ်။ ပြောရရင်တော့ သူက မြန်မာနိုင်ငံကို...
Articles / Lifestyle / Perspective
၁။ ကာမလိမ်လည်ရယူမှုဆိုတာ ဘာလဲ တကယ်တော့ ကာမလိမ်လည်ရယူမှုရယ်လို့ သီးခြားမရှိပါဘူး။ လိမ်လည်မှုထဲမှာပဲ အကျုံးဝင်ပါတယ်။ ပုဒ်မ ၄၁၅ ဖြစ်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာတော့ လူတစ်ယောက်ဟာ သွေးဆောင်၊ ဖြားယောင်း၊ လိမ်လည်တယ်၊ တစ်ဖက်လူဟာ သူသာ မလိမ်ရင်၊ မဖြားယောင်းရင်...
ကျွန်တော်တို့ဘ၀မှာ တစ်ယောက်ယောက်က အနိုင်ကျင့်တာ၊ စော်ကားတာ၊ ဗိုလ်ကျတာ၊ တင်စီးတာ၊ တည့်တည့်ပြောရရင် လူပါးဝတာမျိုးတွေ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ကျောင်းမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ နောက်ဆုံးသွားရင်းလာရင်း ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ ကိုယ့်အချင်းချင်းလည်း ရှိမယ်၊ လူမျိုးခြားက လုပ်တာလည်း ရှိမယ်။...
Gender ဆိုတာ ဘာလဲလို့မေးရင် သတ်မှတ်ချက်တွေကို ဆိုလိုတာပါ။ ယောက်ျားဆိုတာ ဘယ်လိုဖြစ်ရမယ်၊ မိန်းမဆိုတာ ဘယ်လိုဖြစ် ရမယ် ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ ဥပမာအားဖြင့် ယောက်ျားဆိုတာ ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိရတယ်၊ မိန်းမဆိုတာ ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိနေရမယ် စတဲ့ သတ်မှတ် ချက်တွေကို Gender...